Soo Iibso Xisbiga Dumarka Laba-Dhinac Ah Oo Loo Sameeyo V-neck Crop Top & Skirt Long - Shipping Free & No Tax | WoopShop®
Xaflada Haweenka Laba-qaybood oo loo dhigay V-neck Crop Top & Long Skirt
dib u eegista 16
$ 38.99 qiimaha joogtada ah $ 71.99
Color White Buoni
S / Caddaan XL / Caddaan L / Caddaan XL / Miis M / Caddaan M / Mint S / Mint L / Mint
Xisbiga Haweenka Laba-qaybood ah oo Calanka V-qoorta Sare & Dharka dhaadheer - S / Caddaan gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Length Dharka: gaaban
Dharka Length: Mid-Dibi
Nidaamka xiran ee Pant Elastic Waist
Waxyaabaha: Polyester, Cotton
Nooca Xiritaanka: Pullover
Nambarka Tusaale: S12440
Mudada dhererka (cm): Suufyada Dabaysha-Length
Season: Jiilaalka / Xagaaga / Dayrta / Dayrta / Guga
munaasabadda: Party / Club / Cocktail / Fiidkii / Dheecaan / Casual / Beach
Gender: Dumarka / Mudanayaal / Dheddig / Dheddig
Color: Caddaan, Mint
Ogow: Fadlan si taxadar leh u raac tusaha qiyaasta cabbirka si aad u dooratid cabbirka. Ha u dooran sida tooska ah sida caadooyinkaaga. Cabbirka waxaa laga yaabaa inuu leeyahay 2-3cm kala duwanaansha la'aanta maadada. Fadlan ogow markii aad qiyaasaysid.
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 16
Qalabku waa fiican yahay! Ma aha dhuuban! Si fiican ayuu u habboon yahay .. Waxaan ahay 5'2 125lbs. Sida caadiga ah xiro wax yar .. dusha sare waa wax yar oo ciriiri ah laakiin daacadnimo dhab ah maahan. Ma haysto feeraha yar sidaa darteed waa inaan fahmaa hab aan uga dhigo mid shaqeynaya maxaa yeelay waxaan jecelahay off off waa inuu u muuqdaa.
Aad u fiican, tayo wanaagsan. Goonnada ayaa waxyar dabacsan, way fiicnaan lahayd in la adkeeyo laakiin dhammaanteed way wanaagsan tahay. Waxay qaadatay cabirka S ee dhererka 163 iyo culeyska 55kg (90-70-100). Gaarsiinta degdega ah.
waayo, 88-62-93 cabirka M waa wax yar oo dhexda ku yar, marka laga reebo in wax walbaa fiican yihiin, waan jeclahay.
Jadoado la tenue c'est magnifique
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 72947.
dib u eegista 72947